Voadika ny 10 Aogositra 2017 13:51 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Novambra 2016 no nivoaka ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Noho ny fotoanan'ny orana ankehitriny ao Zimbaboe, any amin'ny firesahana sy ny tombatombanana mikasika izay vinavina ara-pambolena miandry antsika ny ankamaroan ‘ny fotoana sy ny fifantohan'ny firenena. Tahaka ireo toekarena marobe mifototra amin'ny fambolena, ny fepetra isian'ny taona tsara (na ratsy) dia mifototra amin'ny famokarana ny fambolena ao amin'ny firenena. Momba izany indrindra, sahirana mafy ny governemanta manahy ny tantara ratsy ao Zimbaboe, noho ny tantara ratsy mahavariana tamin'ny fanafarana zezika simba avy any Afrika Atsimo.
Raha ny fahitàna azy, Gideon Gono, governoran'ny Banky Foibe no nitarika ny baiko, saingy nony farany, nanome tsiny indray ireo manampahefana ao amin'ny minisiteran'ny fambolena izy. Mandrahona hilaza ny marina momba ny tantara ratsy ankehitriny i Simon Pazvakavambwa, sekretera ao amin'ny minisiteran'ny fambolena, miatrika ny famaky mihantona noho ilay tantara ratsy raha voaraoka. Naneho hevitra momba izany ity lehilahy be volom-bava (The bearded man) ity:
Miatrika ny lalao samirerin'ny ZANU PF amin'ny fombany isika eto. Ankehitriny, tsy maintsy mivonona hijinja ny vokany (miala tsiny amin'ny fomba fiteny) ianao. Tamin'ny taona lasa teo, raha nidoka tena tafahoatra sy nanomboka be resaka tsy amin'ny antony ireo mpikambana ao amin'ny governemantan'i Mugabe, maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana izy ireo ary hita nitsingevana tao amin'ny dobo filomanosana (nisy iray hafa hita tamin'ny herinandro lasa!).
Etsy ankilany, natao fanadihadiana lalina tamin'ny herinandro lasa teo ny fandrahonan'ny governemanta hametraka ny mpiasan'ny CIO ao anatin'ny cybercafe malaza ao amin'ny firenena, mba hahafahan'izy ireo misambotra ireo singa “tsy tia tanindrazana” manaparitaka tsaho momba an'i Zimbabwe. Nahita ity sombiny ity tamin'ny taratasy tao amin'ny iray ao amin'ireo gazetin'i Zimbaboe ny bilaogy Kubatana
Milaza zavatra roa amintsika ny mpanoratra:
- tsy kentrina ireo mpanao gazety tsy miankina mampiasa seha-bahoaka mba hamoahana ny lahatsoratr'izy ireo, ho solon'izany, mampiasa solosain'ny namana sy ny fifandraisana aterinetony izy ireo
- misy ny mitsahotsaho fa ireo tranonkalam-baovao tahaka ny Zimonline dia mahazo ny tantara avoakan'izy ireo avy amin'ny mpanoratra ao amin'ny (asam-)panjakana izay manoratra mandritra ny fotoana iasan'ny fanjakana ary mampiasa ny fitaovam-panjakana tahaka ny solosaina sy ny fifandraisana (serasera).
Eny tokoa, misy ihany koa ny resaka olona matanjaka (goonpower) – leon'ny tenany angaha izy ireo no mikarokaroka manerana ny cybercafe rehetra ao amin'ny firenena, mitady ireo mpanetsiketsika an-tserasera? Tsy mihevitra izany isika.
Tsy lazaina intsony fa horesahana mandritra ny fotoana ela ity olana ity.
Farany, satria vonona hanadino momba izany isika, miverina indray ny resaka fifandimbiasan-toeran'ny filoham-pirenena. Tamin'ity indray mitoraka ity, nitatitra ny NewZimbabwe fa nametraka ny anarany tamin'ny fomba ofisialy ny filoha nasionalin'ny ZANU-PF, John Nkomo mba hirotsaka hofidiana amin'ny toerana ambony indrindra ao amin'ny firenena.
4 andro izayOganda